HAGAAJI CODKA AYAA SII GOYNAYA GUDAHA WINDOWS 10 - JILICSAN
Hagaaji codka ayaa sii goynaya gudaha Windows 10
La dhajiyayMarkii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Sebtember 25, 2021
Isticmaalayaal dhowr ah ayaa ka warbixiyay arrimo dhawaq ah sida Codku wuu sii jarayaa ama maqalku wuu sii jarayaa on Windows 10, iyo adeegyada maqalka ah oo aan ka jawaabin qalad markaad daawato fiidiyowyada ama ciyaaraha. Markaa, haddii aad sidoo kale la kulanto mid ka mid ah arrimaha kor ku xusan, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. Hagahan ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso maqalka sii goynta gudaha Windows 10 PC. Markaa, sii wad akhriska.
7 siyaabood oo lagu hagaajin karo codka ayaa sii wadaya goynta gudaha Windows 10
Habka 1: Cusbooneysii Drivers Audio
Habka 2: Dib u rakib darawallada maqalka ah
Habka 3: Beddel Goobaha Kobcinta Codka
Habka 4: Beddel Hababka Hadalka
Habka 5: Ku socodsii Windows Troubleshooter
Habka 6: Cusbooneysii Windows OS
Habka 7: Hubi Hardware wixii waxyeelo ah
Waxaa jiri kara dhowr sababood oo keenaya in maqalka la gooyo marka ciyaaraha la ciyaarayo ama daawashada arrintu. Waxaa ka mid ah:
Daaqadaha lama cusboonaysiin in muddo ah.
Dareewalada dhawaaqa oo duugoobay waxay keeni kartaa arrimo.
Dejinta codka khaldan Waxay sidoo kale horseedi kartaa in dhawaaqa uu sii wado goynta Windows 10 arrinta.
Ku hadlaayo , gudaha lagu dhisay ama dibadda, waxaa laga yaabaa inuu dhaawac gaaro una baahan in la dayactiro.
Waxaan diyaarinay liis habab ah oo lagu hagaajinayo arrinta la sheegay waxaanan u habeynay sida ku habboon isticmaaleha. Haddaba, mid mid u dhaqan kuwan ilaa aad xal u hesho PC gaaga Windows.
Haddii faylalka darawallada maqalka ah aan loo cusboonaysiin nuqulkoodii ugu dambeeyay ama aysan ku habboonayn nidaamka, markaa isku xirka la sameeyay wuxuu u horseedi doonaa qaabeynta maqalka oo aan habboonayn, taasoo keenta Windows 10 codku wuxuu sii wadaa inuu gooyo khaladaadka. Xalka ugu fudud uguna waxtarka badan waa in la cusboonaysiiyo faylalka darawalka iyada oo la raacayo shabakada, sida hoos lagu sharaxay:
1. Daahfurka Maareeyaha Qalabka iyada oo loo marayo barta raadinta, sida muuqata.
2. Halkan, laba-guji Dhawaqa, muqaal, iyo ciyaarta koontaroolayaasha .
3. Hadda, midig-guji darawalkaaga ( dheh Qalabka Maqalka Qeexida Sare ) oo dooro Cusbooneysii darawalka , sida la iftiimiyay.
4. Guji Si toos ah u raadi darawaliinta, sida ka muuqata.
5A. Hadda, darawaladu waxay u cusbooneysiin doonaan nuqulkii ugu dambeeyay, haddii aan la cusboonaysiin. Raac tilmaamaha shaashadda si isku mid ah.
5B. Haddii kale, shaashadda ayaa soo bixi doonta: Darawalada ugu fiican ee qalabkaaga mar hore ayaa lagu rakibay . Guji Xir si aad daaqadda uga baxdo.
6. Dib u bilaw kombiyuutarka oo hubi haddii maqalku go'o marka ciyaarta ciyaartu ay go'an tahay.
Talada Pro: Haddii aad leedahay Realtek Darawalada Maqalka lagu rakibay nidaamkaaga, raac tillaabooyinka hoos ku xusan si loo xalliyo arrintan:
1. Ku celi Tallaabooyinka 1-3 kor ku xusan.
2. Marka xigta, dhagsii Ka baadh kombuyuutarkayga darawaliinta ku xiga Aan ka soo xusho liiska darawalada laga heli karo kombayutarkayga , sida hoos ku sawiran.
3. Halkan, calaamadee sanduuqa ku xiga Muuji qalab ku habboon oo dooro saaraha sida Microsoft.
4. Hadda, dooro mid ka mid ah Qalabka Maqalka Qeexida Sare versions ka kombuyutarkaaga oo guji Xiga .
5. Sug habka rakibidda si loo dhammeeyo iyo dib u bilow nidaamkaaga haddi la yiraahdo.
Sidoo kale Akhri: Sida loo hagaajiyo stuttering maqalka gudaha Windows 10
Haddii cusboonaysiinta darawallada maqalku ay gacan ka geysan waayeen hagaajinta codka waxay sii wadi doontaa goynta arrinkaaga Windows 10 PC, ka dib dib-u-soo-celinta iyaga waa hubaal inay ku caawinayso.
1. Daahfurka Maareeyaha Qalabka oo la balaadhiyo Xakamaynta codka, muqaal, iyo ciyaarta, sidii hore.
2. Kadib, ku dhufo midigta darawal dhawaaqa oo dooro Qalabka ka saar .
3. Hadda, xaqiiji degdegga digniinta adigoo gujinaya Ka saar , sida ka muuqata.
Afar. Download darawalada gacanta ee ka soo saaraha website. Tusaale ahaan, NVIDIA ama Realtek .
5. Si fudud, raac tilmaamaha shaashadda si loo rakibo darawalka oo loo socodsiiyo la fulin karo .
Ogow : Markaad ku rakibto darawal cusub qalabkaaga, nidaamkaagu wuxuu dib u bilaabi karaa dhowr jeer.
6. Ugu dambayntii. dib u bilow PC-gaaga.
Mararka qaarkood, bedelida goobaha kor u qaadista codka ee goobaha maqalka ayaa kaa caawin doona in la xalliyo maqalka ayaa sii wadaya goynta Windows 10 arrinta. Raac tillaabooyinka hoos ku xusan si aad u dhaqan geliso isla.
1. U gudub geeska midig ee hoose ee shaashaddaada desktop oo ku dhufo midigta Cod icon.
2. Hadda, dhagsii Codad, sida hoos ku sawiran.
3. U beddelo Isgaarsiinta tab oo hubi ikhtiyaarka cinwaankiisu yahay waxba ha samayn .
4. Guji Codso > OK si loo badbaadiyo isbedelada.
5. Marka xigta, u beddel dib u ciyaar tab oo midig-guji kaaga qalab maqal .
6. Halkan, dooro Guryaha ikhtiyaarka, sida ku cad.
7. Hadda, u beddel Kobcinta tab ee Guryaha Hadalka daaqada.
8. Halkan, calaamadee sanduuqa ciwaankiisu yahay Dami dhammaan hagaajinta, sida hoos ku cad.
9. Ugu dambeyntii, dhagsii Codso > OK si loo badbaadiyo isbedeladan.
Sidoo kale Akhri: Maxaa la Sameeyaa Marka Laabtoobkaaga si lama filaan ah u yeelanin Cod?
Waxa kale oo aad hagaajin kartaa habaynta hadalkaaga si aad u xalliso dhawaaqa sii goynaya Windows 10, sida lagu sharaxay habkan.
1. Furo Cod Dejinta daaqada la isticmaalayo Tallaabooyinka 1 & 2 ee habkii hore.
2. Gudaha dib u ciyaar tab, guji habeyn, sida ka muuqata.
3. Halkan, guji Xiga in la sii wado.
4. Ka saar sanduuqa Hore bidix iyo midig hoostooda Ku-hadlaayaal heer-sare ah oo guji Xiga , sida hoos lagu muujiyey.
5. Ugu dambeyntii, dhagsii dhame si loo dhammeeyo dejinta qaabeynta.
Hadda, hubi haddii maqalku sii wado jarista Windows 10 arrinta ayaa lagu xalliyey nidaamkaaga. Haddii kale, isku day xalka xiga.
Shaqooyinka cilad bixiyaha waa:
Nidaamka xidho dhammaan Adeegyada Cusbooneysiinta Windows.
Galka C:WindowsSoftwareDistribution waa loo magacaabay ilaa C:WindowsSoftwareDistribution.old oo tirtira dhammaan kaydadka soo dejinta ee ku jira nidaamka.
Ugu dambeyntii, Adeegyada Cusbooneysiinta Windows waa dib loo bilaabay
Waa kuwan sida loo maamulo cilad-doonka ku dhex-dhisan Windows si loo hagaajiyo dhawaaqa sii goynaya gudaha Windows 10 dhibaatada:
1. Ku dhufo Daaqadaha furaha iyo nooca Guddiga xakamaynta gudaha bar raadinta oo fur Guddiga xakamaynta halkan ka yimid.
2. Raadi Ciladaynta adigoo isticmaalaya sanduuqa raadinta oo guji.
3. Hadda, dhagsii Eeg dhammaan ikhtiyaarka ku yaal muraayadda bidix.
4. Guji Cusboonaysiinta Windows , sida ka muuqata.
5. Hadda, dhagsii Sareeye .
6. Calaamadee sanduuqa calaamadeysan Si toos ah u codso dayactirka oo guji Xiga .
7. Raac tilmaamaha shaashadda si loo dhamaystiro habka cilad-raadinta.
Inta badan, habka cilad-raadinta ayaa xallin doona arrinta, waxayna ku siinaysaa inaad ogaato inay aqoonsan karto oo hagaajin karto dhibaatada. Si kastaba ha noqotee, haddii ay tiraahdo ma aqoonsan karto arrinta, isku day xalka xiga.
Sidoo kale Akhri: Hagaaji codka kombiyuuterka oo aad u hooseeya Windows 10
Microsoft waxay soo saartaa cusboonaysiinta waqtiyada qaarkood si ay u hagaajiso dhiqlaha nidaamkaaga. Ku rakibida cusbooneysiin cusub ayaa kaa caawin doonta. Sidaa darteed, had iyo jeer hubi inaad u isticmaasho nidaamkaaga noociisa la cusboonaysiiyay. Haddii kale, faylasha ku jira nidaamka ma noqon doonaan kuwo la jaan qaadi doona faylalka ciyaarta taasoo horseedaysa goynta maqalka marka la ciyaarayo arrimaha ciyaaraha. Raac tillaabooyinka hoos ku xusan si aad u cusboonaysiiso Windows OS-kaaga.
1. Riix Daaqadaha + I furayaasha si wadajir ah loo furo Dejinta on your desktop/laptop.
2. Hadda, dooro Cusboonaysiinta & Amniga .
3. Marka xigta, dhagsii Hubi wixii cusbooneed laga bilaabo guddiga saxda ah.
4A. Lasoco tilmaamaha shaashadda si loo soo dejiyo oo loo rakibo cusboonaysiinta ugu dambeysay ee la heli karo.
4B. Haddii nidaamkaagu hore u cusbaa, markaas wuu tusi doonaa Waad la socotaa fariinta.
5. Dib u kici kombayutarkaga oo ku raaxayso baahinta ciyaaraha, fiidyaha, iyo filimada aad dooratay.
Kulayl xad dhaaf ah Waxa kale oo laga yaabaa inay gacan ka geysato waxqabadka liita ee kombiyuutarkaaga iyo meelaha ku hareeraysan. Kuleylku wuxuu dhaawici doonaa qaybaha gudaha wuxuuna hoos u dhigi doonaa waxqabadka nidaamka si tartiib tartiib ah.
Ku naso kombiyuutarkaaga inta u dhaxaysa saacadaha shaqada ee dheer. Haddii aad la kulanto wax arrimo hardware ah, ka dibna u tag dayactir xirfad leh.
Haddii qalabkaagu uu ku hoos jiro dammaanad, waxaad codsan kartaa beddelka ama hagaajinta , sida xaalku yahay.
Sida Loo Hagaajiyo Wax Cod Ah Ciyaaraha Steam
Hagaaji Khaladka Culayska Codsiga Steam 3:0000065432
Hagaaji ARK Aan awoodin in la waydiiyo macluumaadka adeegaha ee martiqaadka
Hagaaji Logitech Mouse Laba jeer Riix Dhibaatada
Waxaan rajeyneynaa in hagahan uu ahaa mid waxtar leh oo aad awooday hagaajin codka ayaa sii goynaysa Windows 10 arrin. Nala soo socodsii habka kuugu fiican. Sidoo kale, haddii aad hayso wax su'aalo ah ama talo soo jeedin ah, ka dib waxaad xor u tahay inaad ku riddo qaybta faallooyinka.
Pete waa qoraa shaqaale sare ah oo ka tirsan Cyber ​​S. Pete wuxuu jecel yahay wax kasta oo tignoolajiyada ah sidoo kale waa DIYer qalbiga ku haya. Waxa uu leeyahay waayo-aragnimo toban sano ah oo ku saabsan qorista sida loo sameeyo, sifooyinka, iyo tilmaamaha tignoolajiyada ee internetka.